एघार जुवाडे एकै खालबाट पक्राउ
२०७६ असोज २२ बुधबार, काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले रु दुई लाख १४ हजार नगदसहित ११ जना जुवाडे पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरीवृत्त महाराजगञ्जको टोलीले टोखा नगरपालिका–११ गोँगबुमा रहेको पूर्ण लिम्बूको कोठामा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा बुधबार साँझ उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । ... बाँकी अंश»
२०७६ असोज २२ बुधबार, काठमाडौँ । भक्तपुरको सल्लाघारीबाट देखिएको इन्द्रेणीको मनोरम दृश्य । ... बाँकी अंश»
२०७६ असोज २२ बुधबार, दमौली । तनहुँको भानु नगरपालिका–२ नारेश्वरटारमा बुधबार पिङ खेल्दै एक बालक । ... बाँकी अंश»
नवदुर्गाको मूर्ति विसर्जन
२०७६ असोज २२ बुधबार, बाँके । नवरात्र सुरु भएसँगै स्थापना गरी नौं दिनसम्म पूजाआजा गरिएका मूर्ति राप्ती नदी किनारमा विसर्जन गर्दै भक्तजनहरु । ... बाँकी अंश»
टेम्पो दुर्घटनामा गुराँसको मृत्यु, चार जना घाइते
२०७६ असोज २२ बुधबार, भोजपुर । हतुवागढी गाउँपालिकामा टेम्पो दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने चार जना घाइते भएका छन् । अपराह्न १ बजे हतुवागढी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ होम्ताङको भित्री सडकमा दुर्घटना भएको हो । ... बाँकी अंश»
झोलुङ्गे पुलले दुई घण्टाको बाटो तीन मिनेटमा, जोड्यो दुई जिल्लालाई
२०७६ असोज २२ बुधबार, म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका २ ज्यामरुककोटको फापरखेत र बागलुङ जिल्लाको चनोटे जोड्ने ठूलोखोलामाथि निर्मित झोलुङ्गे पुल । ... बाँकी अंश»
आस्थाचोकमा बस दुर्घटना हुँदा, ३८ जना घाइते
२०७६ असोज २२ बुधबार, मुग्लिन । चितवनमा बस दुर्घटना हुँदा ३८ जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये एकको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ । ... बाँकी अंश»
पहिले नाच त्यसपछि भोज
२०७६ असोज २२ बुधबार, कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका ३ जोनापुरमा दशैंका अवसरमा बुधवार थारु समुदायका गुरुवाले आयोजना गरेको भोजमा खाना खादै सखिया नृत्य टोलीका सहभागी । ... बाँकी अंश»
मदिरा पिएर आमा–छोराद्धारा पमरियाको हत्या ?
२०७६ असोज २२ बुधबार, सप्तरी । सप्तरीमा एक ज्येष्ठ नागरिकको हत्या आरोपमा उनकी श्रीमती र छोरा पक्राउ परेका छन् । कुटपिटबाट मृत्यु भएपश्चात् फरार महादेवा गाउँपालिका–१ पकरीकी ५० वर्षीया जमुनी खातुन र उनका छोरा २३ वर्षीय नइम पमरियालाई सप्तरी प्रहरीले पक्राउ गरेको जनाइएको छ । ... बाँकी अंश»
भानुमा चार वर्षीय बालकलाई मार्यो चितुवाले, को को मार्यो अहिलेसम्म ?
२०७६ असोज २२ बुधबार, दमौली । चितुवाको आक्रमणबाट तनहुँको भानु नगरपालिकामा मंगलबार एक बालकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा भानु नगरपालिका–१ जामुनेगैह्रा बस्ने विष्णु बानियाँका छोरा चार वर्षीय आशिष बानियाँ रहेका छन् । ... बाँकी अंश»
झुम्रा नृत्यले रोमाञ्चित पार्दै
२०७६ असोज २१ मंगलबार, कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–३ वडा कार्यालयले मङ्गलबार दशैंका अवसरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा झुम्रा नृत्य देखाउँदै थारु महिला । ... बाँकी अंश»
२०७६ असोज २१ मंगलबार, म्याग्दी । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–६ दरवाङमा मङ्गलबार बिजयादशमीको टिका लगाएपछि सेल्फी खिच्दै । ... बाँकी अंश»
बालगृहमा उर्लाबारीका मेयर फागोले मनाए दशैं, खुशी भए बालबालिका
२०७६ असोज २१ मंगलबार, उर्लाबारी । उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयर खड्ग फागोले मोरङको उर्लाबारीमा अवस्थित नमुना बाल गृहका आश्रित बालबालिकाहरूसङ बिगत बर्ष झैं यसपटक पनि विजयदशमी मनाएका छन् । ... बाँकी अंश»
विद्यार्थी नेता कृष्ण कार्की अन्न ग्रहण नगरि दुर्गा अनुष्ठानमा
२०७६ असोज २० सोमबार, मोरङ्ग। नवदुर्गाको आराधना गरिने दशैंको नवरात्रमा नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व सहमहामन्त्री कृष्ण कार्कीको भक्ती अहिले पूर्व क्षेत्रमा चर्चामा छ। ... बाँकी अंश»
बडादशैँ पर्वमा रमाउने बेलामा महोत्तरीका बस्तीमा बँदेल आतङ्क
२०७६ असोज २० सोमबार, महोत्तरी । बडादशैँ पर्वमा रमाउने बेलामै जङ्गली बँदेलले बाली सखाप पार्दै उधुम मच्चाएपछि महोत्तरीका किसान हैरान भएका छन् । ... बाँकी अंश»